Semalt Inotsanangura Kusiyanisa Pakati Pakuramba Kwebasa Rinoshungurudza, Kukurukurwa Kwekushandisa uye Kubhadhara Kwekushandisa
Encryption mapurogiramu akagadzirwa kuti aone bots uye avadzivise kubva pakukohwa chero rudzi rwemashoko. Zvinosuruvarisa zvikuru kuti mabhota akashandurwa kuti adzore kuchengeteka uye ivo vanoisa keylogger mapurogiramu mumakirini ane utachiona. Vhigilogi vanobatsira bots control uye vanononga mapurogiramu ese ekombiyuta, iyo inoshandiswa kukanganisa PayPal ID yako kana tsanangudzo yekadhi yemakadhi. Botnets inoshandiswawo kuparadzira uye kuparadzira marudzi akasiyana emavirusi uye mabhota mumutambo. Vanoshandisa vashandi mumabasa anonyadzisa uye vanoita makombiyuta avo emakombiyuta pamwe neAIDS maEmail. Kana iwe ukaitika kuti uise pane imwe mubhadharo-per-click system, mabhota anogona kuwana zvido zvako zvemari - linux managed vps special. Zombies zvinowanzoshandiswa kushandisa zvigadzirwa zvemushandi kuwana mari kubva pamari yako-per-click systems.
Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vanobudirira, anotsanangura kuti botnets inoshandiswa kutanga kurwisa pane imwe pakombiyuta faira kana kuti kushungurudza nekuvhiringidza maitiro kuburikidza nekupamba kubatana. Uyezve, vanopedza bandwidth yenyu uye vanowedzera purogiramu yezvinhu..Kuramba Kwebasa Kurwisa (DoS) inowanzoshandiswa kuparadza nzvimbo yepikisano uye inoita basa rinokosha pakuritora.
Botnets inokanganisa mukuoma nekukura; Dzimwe dzadzo dzakakura apo dzimwe dzidiki. Mahombekombe makuru ane zviuru zvemarudzi eZombies, uye zviduku zvingangova nemazana mashoma madrones. Botnets yakatanga kuwanikwa munaJuly 2010, apo FBI yakasunga wechiSlovenia. Akanga aine mhosva yekuparadzira zvinhu zvinotyisa kubva kumazana kusvika kune zviuru zvemakombiyuta emakombiyuta. Paavhareji, mamiriyoni 12 emakombiyuta akabatwa nehutachiona. Kune mhando dzakasiyana dzehutano bots, humwe hwahwo hunogona kuvhara makombiyuta maitiro nenzira imwecheteyo semavirusi kana malware, uye mamwe acho ari maduku uye haagoni kutapura chigadziro chako pane chero mari. Irobhoti network kana botnet ndiro boka re zombi dzemakombiyuta kana bhobho iyo inotungamirirwa ne spammers uye inoshandisa zvinhu zvakawanda. Botnets inogona kunge yakagadzirwa nemakwikwi emakombiyuta emakombiyuta anotarisa mapurogiramu akafanana kana boka remakombiyuta ane utachiona hwehutachiona nehutachiona. Kana ikangowanikwa pamakombiyuta ako, kunyanya pasina ruzivo rwevashandi, kombiyuta yako ichava zombie, drone kana kombiyuta pasina nguva. Icho hachizoshandi zvakanaka uye hachizopikisi maitirwo evanodzidza. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvirongwa zve-anti-malware kana chirongwa chinonzi antivirus chinofanira kubvumirwa nekukurumidza.
Spam neMotokari Kuongorora:
Bhoteteni inoshandiswawo kuvhara kombiyuta yeTCP / IP protocol uye inoshandisa maitiro ayo chaiwo kune iyo. Botnets inowanzoshandiswa mukubatana neZombies dzakawanda uye mavhairusi uye kukohwa ma kero e-mail. Vanotumira nhamba yakawandisa yepam data uye phishing emails kune avo vakaurayiwa. Kazhinji, zombies uye bots vanoshandiswa kunyengera zita rekushandisa uye password ye user kuitira kuti botnet inogona kudzora mabasa ayo uye inogona kuishandisa. Iwe unofanirwa kugara uchidzokorora kuchengeteka kwako kuti uve nechokwadi chekuchengeteka kwako paIndaneti.